Graton - Graton मा आफ्नो खेल प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईंको मनपर्ने स्लट मेसिनहरूदेखि टेबल खेलहरू र रूलेटहरू सम्म, ग्राटनमा खेल्नको लागि सधैं केहि नयाँ र रोमाञ्चक हुन्छ। यदि तपाइँ केहि अलि फरक प्रयास गर्न खुजली हुनुहुन्छ भने, हामीले हाम्रा केहि नयाँ मनपर्ने खेलहरू सूचीबद्ध गर्ने निर्णय गर्यौं जुन विगत केही महिनाहरूमा सम्पत्तीमा आएका छन् र हामीलाई तिनीहरूको बारेमा सबैभन्दा मनपर्ने कुराहरू। चाहे तपाइँ पप संस्कृति प्रेरित केहि खोज्दै हुनुहुन्छ वा केहि अलि बढी परम्परागत कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ, हामीले तपाइँको लागि खेलहरू पाएका छौं।
Cash Falls™ - समुद्री डाकूको ट्रोभ
यदि तपाईं केही समुद्री यात्रा उत्साहको लागि तयार हुनुहुन्छ भने, Cash Falls™ - वैज्ञानिक खेलहरूबाट Pirate's Trove तपाईंको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ। आधार खेलले तपाईंलाई स्क्रिनमा सूचीबद्ध कुल क्रेडिट मूल्य सङ्कलन गर्ने मौकाको लागि आफ्नो रीलहरूमा सिक्का प्रतीकहरू लक गर्न दिन्छ। नि: शुल्क खेल सुविधाले ठूलो जित्नको लागि अझ रोमाञ्चक परिवर्तनहरूका लागि 2-10 पटकबाट कहीं पनि गुणक सक्षम गर्दछ! धेरै ज्याकपोट भुक्तान विकल्पहरूको साथ कम्बो र यो खेलले निश्चित रूपमा खजानाको खोजीमा घण्टासम्म तपाइँको मनोरञ्जन गर्नेछ।
Aristocrat द्वारा सिर्जना गरिएको Fu Dai™ Lian Lian™ परिवारमा यो अपग्रेड गरिएको किस्तामा सुरक्षित विशाल ज्याकपोट पुरस्कारहरू। यसका पूर्ववर्तीहरू जस्तै, यो खेलले खेलाडीहरूलाई अनलक गर्न र मयूर प्रतीकहरू, सिक्का र थप कुराहरू खोलेर पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ प्रत्येक ज्याकपोट प्रकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तीनवटा झोलाहरू छन् - हरियोले समृद्धिको प्रतिनिधित्व गर्दछ, बैजनीले दीर्घायुको प्रतिनिधित्व गर्दछ, र रातोले प्रमुख वा भव्य प्रतिनिधित्व गर्दछ। खेलाडीहरूले सिक्का सङ्कलन गर्दा, BOOST वाक्यांश नदेखिएसम्म झोलाहरू भरिन्छन्। यदि एक खेलाडीले जित्छ जब वाक्यांश बूस्ट लाइट हुन्छ, बोनसहरू बढाउन सकिन्छ। झोलाहरू पनि एकै समयमा घुमाउन सकिन्छ जसले अझ बढी कमाईमा मौकाको लागि अनुमति दिन्छ।
डराउने सानो पसल™
सन् १९८६ को फिल्म, Little Shop of Horrors™ मा आधारित यो Everi स्लट गेममा अन्तरिक्षबाट म्यान-इटिंग प्लान्टबाट सावधान रहनुहोस्! खेलाडीहरूले लुकआउट पिक बोनस, सडनली सेमोर रि-स्पिन, समवेयर दैट्स ग्रीन पिक, र मीन ग्रीन मदर फ्री स्पिन सहित बोनस सुविधाहरू अनलक गर्न सक्छन्। प्रगतिशील ज्याकपटहरू कुनै पनि शर्त स्तरमा पनि उपलब्ध छन्।
विली वोंका ™ - ड्रीमर्स अफ ड्रीम्स™
Scientific Game को Willy Wonka™ - Dreamers of Dreams™ मार्फत सबैको मनपर्ने चकलेटियरको अद्भुत संसारमा प्रवेश गर्नुहोस्। यस स्लट खेलमा मिठो ज्याकपटहरू पर्खिरहेका छन् जसमा 1971 चलचित्र अनुकूलनका क्लासिक क्यारेक्टरहरू छन् जुन बाटोमा मद्दत गर्न पप अप हुँदैछ। खेलाडीहरूले विशेष मिनी खेलहरू सक्रिय गर्न सक्छन् जसमा Oompa Loompa फिचर, क्यान्डी पोउर फिचर, र सुपर फिजी लिफ्टिङ फ्री स्पिनहरू समावेश छन् जसले तपाइँको रिलहरू थप इन-गेम ट्रीटहरूको लागि विस्तार गर्दछ। भव्य पुरस्कार एक विशाल प्रगतिशील हो जुन अनन्त धनको लागि तपाईंको सुनको टिकट हो।
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि रूलेट संसारभरि सबैभन्दा व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त र सबैभन्दा धेरै बारम्बार क्यासिनो खेलहरू मध्ये एक हो। Mystery Card™ मा, यसले पारम्परिक रूलेटको रूप र अनुभूतिमा एकदमै समान रूपमा खेल्छ, जहाँ खेलाडीहरूले रातो र कालो दुवै चिन्हमा नम्बरहरू भएको बोर्डमा आफ्नो बाजी राख्छन्। एक पटक सबै दांव गति भएको छ। बिक्रेताले त्यसपछि कुन नम्बरलाई विजेताको रूपमा चयन गरिने छ भनेर हेर्नको लागि सम्बन्धित नम्बरहरू सहितको पाङ्ग्रा सक्रिय गर्नेछ।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले Graton मा हाम्रा मनपर्ने नयाँ खेलहरूको बारेमा थोरै सिक्न रमाईलो गर्नुभएको छ। तपाईंको अर्को भ्रमणमा यी उत्कृष्ट खेलहरू मध्ये एउटा प्रयास गर्न निश्चित गर्नुहोस्। हामीसँग उपलब्ध अन्य खेलहरूमा थप जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् गेमिङ पृष्ठ। पढ्नको लागि धन्यवाद र हामी तपाईंलाई शुभकामना दिन्छौं!